Tsenan’ny Comesa : nomena fiofanana hanara-penitra ny Malagasy | NewsMada
Tsenan’ny Comesa : nomena fiofanana hanara-penitra ny Malagasy
Nomena fiofanana mandritra ny roa andro ny mpandraharaha malagasy, avy amin’ny orinasa madinika sy salantsalany (PME), ho amin’ny fifehezana ny kalitaon’ny vokatra hampidirina any amin’ny tsena iraisam-pirenena, Comesa. Anisan’ny mpikambana amin’izany tsena izany isika eto Madagasikara. Manome ny fiofanana ao amin’ny Carlton ny CBC (Comesa Business Council).
Tsy ampy orinasa na indostria manodim-bokatra isika eto Madagasikara, ka lasa toa tsy manan-jara any amin’ny tsenan’ny Comesa. Nomarihin’ny minisitry ny Indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina, Chabani Nourdine, ny maha goavana izany tsena izany aty Afrika, ahitana mpanjifa 630 tapitrisa. Noho izany, mila mamokatra aloha isika, izay vao manodina ary amin’izay fomba fanodinam-bokatra izay ny hitakiana fahaizana mifehy ny kalitaon’ny vokatra hatolotra any amin’ny Comesa. « Misokatra ho an’ny mpandraharaha rehetra ny tsena, anjaran’izy ireo kosa avy eo ny miezaka manatsara manaraka ny kalitao amin’izay vokatra hahodina », hoy ny minisitra Chabani Nourdine.
Isaorana ny Comesa amin’ny alalan’ny CBC tonga eto, manampy ny mpandraharaha malagasy, amin’ny fanamafisana fitrandrahana ny tsena iraisam-pirenena sy hanaraka ny fenitra takiana amin’izany. Ny hita mantsy eto, betsaka ny vokatra, saingy ny ankamaroany, tsy voahaja ny kalitaony na ho an’ny tsena eto an-toerana aza. Tsy manaraka ny fenitra takiana ny fahadiovana sy ny fikajiana azy ireny. Nasian’ny teknisianina teny avy amin’ny Comesa ny fanofanana ireo mpandraharaha mitantana orinasa madinika momba ny fanondranana letisia, tohanan’ny CBC. Efa nahitam-bokatra tsara izany tamin’ny taon-dasa tamin’ny fanondranana letisia nalefa any Afrika Atsimo, izay mbola hatsaraina bebe kokoa amin’ity taona ity.
Miara-miasa amin’ny Comesa amin’izao fandaharanasa izao ny COI, Afrika Atsinanana amin’ny alalan’ny East Africa Business Council (EABC) sy ny fikambanan’ny Antenimieran’ny varotra sy ny indostria ao amin’ny Sadc. Anisan’ny tanjona amin’izao fanofanana izao ny hamatsiana ireo tsenambarotra sy hotely lehibe. Maro amin’ireo tsenambarotra na hotely ireo, voatery manafatra vokatra ivelan’ny faritra misy azy. Hita izany eto Madagasikara any amin’ireo tsenambarotra lehibe, saika avy any ivelany daholo. Betsaka anefa ny vokatra eto, toy ny legioma sy voankazo, saingy tsy ampy ny fanodinana azy ireny.